TALOOYINKA UGU SARREEYA EE KU SAABSAN DARYEELKA IYO BEERITAANKA TUNNEL BEERTA - BEERTA
Tunebia waxay gasho acanthaceae qoyska. Waddankeeda waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay kulaylka Afrika. Waxaa jira qiyaastii 200 nooc. Magaca dhirta ayaa lagu sharfay waagii hore ee Karl Peter Thunberg. Ubax ayaa weli leh magac kale - "suzane madow". Waxaan ugu yeeraa sidaa daraadeed midabka dhexe ee ubaxa - guduud madow. Kobcin warshaddan labada gurigaba iyo beerta.
Tunbergia - Lianovidnoe ama dhirta geed. Leaves waa kuwo buuxa, wadnaha-qaabeeya ama qoorta. Waxa kale oo jira lakabyo caleemo ka soo horjeeda. Waxay gaadhaan ilaa 10 cm dherer ahaan. Noocyada dhirta qaarkeed waxay leeyihiin caleemo jajab ah. Ubaxyo Tunbergia gaareen ilaa 4 cm dhexroorka waxaana lagu ururiyaa inflorescences. Sidoo kale, dhirtu waxay leedahay midab kala duwan oo ubax ah, oo ka bilaabanta cadaan ilaa buni. Waxay kala-baxdo laga bilaabo Julaay ilaa Sebtembar, oo ka soo baxaya caraf udgoon. Goobta dabiiciga ah, dhirta waxaa loo tixgeliyaa in ay ahaato daa'in, laakiin gobolkeena waa sanadle waxaana badanaa loo isticmaalaa dhirta. Tunbergia waxay dareensan tahay guriga iyo meelaha lagu koriyo.
Beeridda geedaha Tunebia geedo loogu talagalay
Tunbergia waa warshad aan qabin, oo haddii aad go'aansato inaad ku korto guriga, waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso xaalado yar oo fudud oo ah horumarinta ubaxa wanaagsan.
Waxaad bilaabi kartaa in aad ka qayb gasho taranta taranta tunbiaada dhamaadka jiilaalka (Febraayo) ama bilawga guga (Maarso).
Ma taqaanaa? Inta badan, geedka canabka ah waxaa loo isticmaalaa cabitaanka khamriga iyo daroogada, diyaarinta shaaha leh caleemo, oo loo yaqaan 'rank-judge'. Iyada oo aad la qabsan karto wejiga, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee waxyeellada leh.
Toobiyeyaasha Tunebia waxay calaamad u yihiin biqilka saboolka ah, markaa waa in marka hore lagu qooyay kicinta kicinta Epin. Tani waxay ka caawineysaa inay si dhakhso ah iyo si ka wanaagsan u koraan.
Ciid: ka kooban iyo bacriminta
Isku darka ciidda wuxuu u baahan yahay in laga sameeyo caleenta caleen iyo ciid oo lagu daro humus. Inkastoo xaqiiqda ah in miraha ay ku jiraan qaar ka mid ah nafaqooyinka, haddana way ka fiican yihiin in la bacrimiyo leh compost iyadoo lagu daro ciid iyo peat. Sidoo kale, carrada waa inuu dabacsan yahay, iftiin iyo si dhakhso ah u dhaafaan qoyaanka.
Sida loo abuuro abuurka
Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho dhoobada dhoobada ah ee lagu dhejiyo qashinka loogu talagalay beeritaanka. Waa inay lahaadaan godad biyo ah. Markaad doonaysid inaad ku beerto tunboia, horay uga daadi weelasha, iyo maalinta ka horeysa inaad beerato qalabka dhulka u baahan yahay in la waraabiyo.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad abuurto abuurka dheriga oo leh peat si qoto dheer ah 1.5 cm oo ku shub carrada. Ka dib markaa, weelka waa in lagu daboolaa biriijka si loo abuuro saameyno aqalka dhirta lagu koriyo. Sidaa darteed caleemaha si dhakhso ah u horumarin doonaan Ka dhig abuurka weelka noocan oo kale ah 2-3 toddobaad. Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in dheryaha loo baahan yahay in la duubo si loo soo saaro kondensate.
Waa muhiim! Ka daawee waraabinta, sida xad-dhaaf ah qoyaanka waxay sababi kartaa geedo geedo ah.
Isla marka aad aragto caleemaha kowaad, filimka ayaa laga saari karaa. Haddii ay jiraan tiro badan oo ah sprouts, dhammaantood waxay u baahan yihiin in la quusiyo.
Geedo waa in la dhigaa daaqadaha, daaqadaha kuwaas oo wajahaya dhinaca galbeedka ama dhinaca bari, laakiin waa muhiim inaad sameyso iftiin kala duwan, sida taajajka dhirta uu gubi karo oo ka soo baxaya qorraxda tooska ah ee qorraxda ah Xilliga ugu wanaagsan ee tunbergia guga iyo xagaaga waa inay noqdaan ilaa 25 ° C. Xilliga dayrta waxay u fiicantahay inaad raacdo 17 ° C. Xilliga xagaaga waxaad u baahan tahay inaad waraabiso dhirta inta badan. Go'aanso marka aad u baahan tahay inaad waraabiso dhirta, waxaad ku dari kartaa lakabka ugu sarreeya ee dhulka. Biyaha waa inay noqdaan biyo difaac ah.
Waa muhiim! Iska ilaali biyo joogta ah digsiga.
Xilliga hawada kulul, waxaad u baahan tahay inaad ku darto oo aad ku buufiso biyaha debecsan heerkulka qolka. Xilliga dayrta waxa fiican in la yareeyo biyaha. Waxaa lagama maarmaan ah in la bacrimiyo warshad laga bilaabo guga ilaa dayrta. Tani waa in la sameeyaa 3 asbuuc walba, Bacriminta macdanta. Marka laba caleemo oo soo baxaan, caleemaha waxay u baahan yihiin in la yareeyo oo ay dhasho. Dhirta xooggan waa in ay ku jiraan hanta. Marka geedo tufaaxa koraan ilaa 15 cm, waxaad u baahan tahay inaad nuujiso dushooda geedo.
Haddii aad rabto in aad hesho tunweia qaro weyn oo xoog leh, geedo u baahan tahay in la bacrimiyo ka soo pick ugu horeysay toddobaadkii hal mar leh Bacriminta in ku jira nitrogen. Haddii aad rabto inaad hesho boomaato badan iyo dhirbaaxo dheer, waxaan ku talinaynaa in aan bacrimiyo geedo.
Xeebeedka geedo of tunbergia ee dhulka u furan
Ka dib markaad ku beertid tunbergia on geedo, iyo waqti ka waqti ku filan u gudbay horumarinta caadiga ah ee geedka, waxaa lagu wareeri karaa dhulka u furan.
Ma taqaanaa? Daroogooyinka ay ku jiraan kiimikada dabiiciga ah ee ku jirta tunnelia waxay hoos u dhigtaa geedi socodka gaboobay, waxayna ku dhejisaa unugyada DNA ee waxyeelloobay. Waxay ka caawinaysaa in lagu sumoobo sunta, daaweynta sonkorowga iyo cudurrada kale ee indhaha.
Tunbergia waa in ay dhasho bartamihii May, marka dhaxan guga la soo dhaafay. Waqtigaa, geedo ayaa sii xoogaysan doona oo diyaar u ah meel cusub beerta. Waxaa ugu wanaagsan in lagu beero geedo tunbergia furan guga ama xagaaga hore.
Xulashada iyo diyaargarowga goobta si aad u degto
Tunbergia waa inay noqotaa meel aan la haynin iyo iftiin wanaagsan, dhinaca galbeed, koonfur ama dhinaca bari. Carrabku waa inuu noqdaa mid iftiin leh oo la suubin karo. Waa inay leeyihiin nafaqooyin iyo nuuro ku filan. Sidoo kale, waa in si fiican loo miiro, dhexdhexaad ah. Ciidda waxay u baahan tahay in la daboolo oo la bacrimiyo humus ama hab gaar ah.
Masaafada u dhaxaysa sariiraha waa in aysan ka yarayn 20 cm, iyo inta u dhaxaysa godadka - 45 cm Tani waa la sameeyaa si ay dhirta u koraan ballaca. Ka hor intaan la soo degin, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto taageerooyinka qaabka shabakadda. Liana ayaa ku kori doonta.
Kadibna geedo ka mid ah tunbooyinka koraya ayaa la beeray. Tani waa in si taxadar leh loo sameeyaa si aanay u dhaawacin dhirta dhalinyarada. Qoto dheeraynta beerta - 1.5 cm Ka dibna warshadda waa in lagu rusheeyaa dhulka iyo wax yar.
Ka dib markii laga beerto geedo waxay u baahan yihiin in ay biyo dhirtaan oo daboolaan ciidda leh mulch. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ka takhalusto haramaha cirridka. Ubaxa ugu horeeya waxaad arki kartaa 100 maalmood ka dib markaad jiidayso.
Tunbergia waa warshad aan qabyo ahayn, sidaas darteed haddii beerto ay ku guulaysato, dhirtuna waxay qaadatay xidid, waxaad bilaabi kartaa daryeel.
Ma taqaanaa? Isgoysyada saxarada caleenta caleemaha ee ku taala Badhtamaha Malamu ayaa loo sameeyaa si loo daaweeyo dhibaatooyinka maqaarka: boogaha, jarista, boogaha.
Dhamaan wax ku saabsan waraabinta
Tunbergia waxay jecel yihiin wax badan oo biyo ah, laakiin waxaad u baahan tahay inaad raacdo. Inta lagu jiro ubax, qolka dhulka dhoobo waa in aysan qalajin, sida caleemaha ay bilaabi doonaan inay dhacaan, ubaxna waxaa laga yaabaa in ay waxyeeleeyeen caarada caarada. Sida ugu dhakhsaha badan ubaxu uu dhamaado, waa in la yareeyaa waraabinta. Xilliga xagaaga oo qallalan, waxaad u baahan tahay inaad sameyso oo kaliya inaad waraabiso tunebia, laakiin sidoo kale buufinta fiidkii.
Labiska dharka ugu sarreeya waa la keenaa xilliga guntinta, laakiin waxaa wanaagsan in aanad u jilicsanayn. Xaaladaha noocan oo kale ah waxay kuu keeni doonaan adoo ubax leh. Inta lagu jiro ubax, waxaad u baahan tahay inaad samayso Bacriminta macdanta. Waxaa lagu daraa biyaha waraabka todobaad kasta.
Guga iyo xagaaga, bil kasta waxaad u baahan tahay inaad samayso bacriminta macdanta leh inta lagu jiro koritaanka firfircoon.
Waa muhiim! Haddii aad "dhaafto" warshadda, caleemuhu waxay noqon doonaan kuwo qurux badan, ubaxu wuxuu noqon doonaa mid yar.
Manjooyin ubax ah
Gooyo waxaa la sameeyaa horraanta gu'ga ama bisha Febraayo. Waxaad sidoo kale sameyn kartaa tan kaddib markii ubax. Si ay warshadda u qaadato qaab baadiyaha ah, waxaad u baahan tahay inaad xirto dushooda.
Dhirta yaryar waxay u baahan yihiin in la gooyo, dadka waawaynna way ka fiicnaadaan inay taabtaan. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in aad ka soo baxdo caleemo daciif ah ama aad u qaro weyn Waxaad u baahan tahay inaad iska gooyso saldhigga iyo waqtiga oo dhan si aad u dirto jihada aad rabto.
Gooyo dhirta dhalinyarada waxaa loo baahan yahay koritaanka xooggan, laakiin tani waxay yareyn kartaa ubax.
Marka ubaxyada tunbergia ay dhammaato, sanduuqyada abuurka ayaa ka muuqan doona meelahooda. Waa in la ururiyaa isla markiiba ka hor intaan la furin, waayo, abuurku wuu u soo dhici karaa dhulka. Waxaa fiican in la furo sanduuqyada ka sare miiska saaran warqad - miraha ayaa ku dhici doona. Markaas waxay u baahan yihiin in la qalajiyo oo lagu kaydiyo sanduuqyada kartoonada. Nolosha shelf ee abuurka waa 2 sano.
Sidee kubbadaha winbergia
Haddii aad koraan tunbergia aag furan, waa in lagu tuuraa xilliga dayrta, maadaama uusan ka badbaado jiilaalka. Haddii aad ku beeranayso warshad guriga ku jirta dheri weyn, waxaad u baahan tahay inaad iska xiirto caleemaha.
Waa muhiim! On warshad waa inay noqdaan 5 ku hari.
Qaybaha waa in lagu daaweeyaa xal of kaneecada. Waxaa fiican in dheriga loo wareejiyo meel qabow oo heerkulku uusan ka sareeynin 15 ° C. Waqti marba mar waxaad u baahan tahay inaad qoyso lakabka sare ee carrada. Warshadu waxay ku jirtaa gudaha gudaha illaa dhammaadka guga. Ka dib markaa, waxaa laga qaadi karaa balakoonka, laakiin tani waa in la sameeyaa si tartiib tartiib ah si ay warshadu u caadada u tahay heerkul kale. Taas ka dib, tuneelku wuxuu bilaabi doonaa buro cusub iyo caleemo, isla markaana wuxuu bilaabi doonaa inuu hore u barbardhigo markii hore markii ugu horeysay.
Isku-dhafka tunbergia ee dhirta kale iyo isticmaalka qaabeynta muuqaalka
Tunbergia waxaa si qurux badan loo isticmaalaa naqshada muuqaalka. TSidii uu dhirta u dhaqsaha badan yahay, tuneelku wuxuu ku qurxin doonaa barxadda, shaashadda, tiirarka iyo abuurida geeska cagaaran ee degaanka. Halkaas waxaan kugula talineynaa in aad degto ipomoea ama asarin, maaddaama ay si taxadar leh u eegi karaan ubax gaaban. Waxaad kaloo ku kori kartaa tunbo-ga dheriga. Caleemaha ayaa hoos u dhigi doona.
Ma taqaanaa? Thunberg ayaa si fiican loo yaqaan xitaa saddex kun oo sano ka hor. Guryaheeda waxaa adeegsaday wadaaddadii hore ee China, Malaysia, Thailand iyo Tibet. Si taxadar leh u caleemo qulqulaya ee tunbergia ayaa loo isticmaalay dhiigbaxa caadada culus. Dhakhaatiirta Thai ayaa daawooyinkan u isticmaalay kuleyl xoog leh ama sida lidka-ka-celinta sarkhaaniga ah wax kasta oo macnaheedu yahay.
Sidee loola tacaali karaa cayayaanka iyo cudurada suurtogalka ah
Tunbergia si aad ah ayey u saameeyeen cudurada, laakiin waxaa ka mid ah fayrasta caarada caarada, xayawaanka, cayayaanka iyo cufnaanta waxyeelada geedka.
Caarada caarada Nafaqadani waxay ku quudisaa qaybaha unugyada. Waxaad arki kartaa. Dhibco cad iyo caleemaha dhuuban ayaa ka muuqda caleemaha. Iyada oo caleemo adag oo xoog leh ayaa caleemo cad u noqda, iyo dhirta oo dhan waxaa lagu daboolay cagaha. Dhamaadka darajooyinka caleemaha iyo caleemaha, miisaanka miisaanka noolaha ah ayaa soo uruuriya, taas oo caqabad ku ah.
Aphid Guga, aphids degaan on caleemaha dhalinyarada iyo on underside ee taajkii. Aphids quudiyo cagaarka cusub iyo burburiyaan caleemaha yar yar. Sidoo kale aphids waxay qaadataa fayrasyo ​​keena gala. Waa kuwa iyagu horseedi kara dhimashada tunebia. Waxaad ka takhalusi kartaa aphids leh cayayaanka ku salaysan pyrethrum-ku salaysan.
Shchitovka. Marxaladda hore, way adagtahay in la ogaado cayayaankan. Waxaa habboon in la hor mariyo ka hortagga. Kala-baxyada qaangaarka ah way fudud yihiin in la arko. Waxay u eg yihiin dhibco ku yaal caleemaha, iskutallaabta iyo caleemaha. Suufka ayaa sidoo kale ka muuqda caleemaha (dareeraha dhegaha).
Whitefly. Ku dul-noolaashu waa yar yihiin, laakiin way fududahay in la ogaado, maaddaama ay u socdaan "adhiga". Cayayaanka waxaa laga arki karaa subaxda caleemaha. Qaaxada iyo dadka waaweyn waxay ku quudiyaan dheecaanka miraha, iyo dhibco jaale ah oo muuqda goobta qaniinyada. Waxay u horseedi karaan dhimashada geedka.
Waxaad ka takhalusi kartaa dhammaan cayayaanka adigoo ku buufinaya daawooyinka "Actellic" iyo "Fitoverm". Laga soo bilaabo daawooyinka dadweynaha waxaan kugula talineynaa in aad ku dhaqdo geedka canabka ah xalka saabuun, laakiin tani waa in lagu sameeyaa iyadoo laysku dhufto.